मेरो आत्मकथा [Story] Part-4
Aakar August 13, 2011
प्यासेन्जर कोइ भुस परे, धादिङे जती जम्मैले पालैपालो वाके। तीनलाई हेर्दाखेरी त ड्राइभर मस्तसँग अगाडि सिटमा बसेकोछ, स्टेरिङ् घुमाकोछ, गीत सुन्दै मोटर हुइँकाकोछ भन्ने लाग्दो हो। यहाँ मान्छेलाई कति पीर छ, तीनलाई के थाहा? हुन त म पनि केटकेटी हुँदा त्यस्तै ठान्थेँ। मोटर देखेपछी स्कुल छोडेर मोटरमा झुन्डिन जान्थें। बा-आमाले गाली गर्दा ती मेरा र मोटरका त दुश्मनै हुन की जस्तो लाग्थ्यो। हेर्दाहेर्दै स्कुल छोडियो, घर छोडियो, गाउँ छोडियो... सबै कुरा छोडियो तर केही पाइएन। पाइयो त एउटा खँलासीको जागिर।
जे कुरा पनि रहर हुँदा मात्रै रमाइलो लाग्ने रहेछ, त्यही रहर काम बन्यो भने मन मर्दो रहेछ। तर के गर्नु? पढाई छैन, ईलम छैन, सिप छैन? रमाइलोको लागि बसमा झुन्डिदा झुन्डिदै आखिरमा ड्राइभर सम्म बनियो। अब ईलमले यो भन्दा अरु चाँहीं केही बनिएला जस्तो छैन। अब बन्न मन लागेको भनेको बाउ हो, तर खोइ दुइटा ज्यान पाल्न त धौ धौ भएको बेलामा कसरी धान्ने हाउ? बुढीले पनि खुब रहर गर्छे, तर भन्न सक्दिन बिचरी, मेरो ब्यथा त्यस्ले जस्तरि कल्ले बुझ्छ र?
त्यसैले अब सोच्नै पर्छ, रिनधन नै गरेर भए पनि बिदेश जानु पर्‍यो। एउटा सन्तानको मुख हेरेर जान पाए झन बढी दु:ख गर्न मन लाग्छ होला कि। यता बुढीलाई पनि एउटा साहारा हुन्छ। अचेल नेपालमा लाउरेका बुढी बिग्रेको देख्दा दिक्क लागेर आऊँछ। तर मेरी त्यस्ती छैन। माया गरेर ल्याएकी हो, भरोशा लाग्छ। हुन त त्यस्लाई ल्याए देखी म पनि कम्ता सुध्रेको छैन । टिपै पिच्छे लाउरिनीहरु टासिनै आइपुग्छन, लेशमा झुन्ड्याएको बुढीको फोटो देखाइदिए पछी आँफै तर्किन्छन। नत्र म नि झिल्के ड्राइभर पो हूँ नि।
घरमा अचेल बुढी दुब्लाएर हाडछाला मात्रै भएकी छ, के भएकी हो कुन्नी? भीत्र भीत्रै बिरामी पो छ कि? मलाई केही भन्दिन। यस्तो बेलामा दुई जिउकि भई भने फेरी झन् दु:ख पाउने पो हो कि? पाउने सल्लाह गरेपछी एकताल राम्रो डाक्टर सँग लगेर देखाउनु पर्ला अनि बल्ल बिचार गर्नुपर्ला। मलाई त बिदेशै गएँ भने नि सधैं यसैको पीरले सताऊँछ जस्तो लाग्यो।
संसारमा मलाई मात्र यत्रो पीर हो की सबैलाई हो? हुन त यो खलाँसीलाई देख्दा यस्लाई केही पीर छैन जस्तो लाऊँथ्यो, अस्ती फिट्टु भएर ड्वाँ-ड्वाँ रूँदै सबै कुरा खोल्दा मेरा पनि आँखा रसाएका थिए। पढ्दा पढ्दैको केटो कान्छीआमाले घरमा बसिखानै नदिएपछी सदरमुकाम तीर आएको रहेछ, कताबाट साहुलाई भिनाजु नाता लगाएर खलाँसी जागिर पायो। सोझा बाउछोरा मात्र दु:खसुख गरेर बस्दा रहेछन, कुन चाहिँले भुँडी बोकाएर उसको बाउलाई भिडाइदिएछन।
बालाई सधैं रक्सी खाएर पिट्थी रे कान्छीआमाले, आजसम्म त बालाई मारिसकी होली; बाको मुख पनि हेर्न नपाउने भएँ भन्दै रोएको थियो। खलाँसी त नाम मात्रैको छ, जम्मै काम म आँफैले गर्नुपर्छ, तर पढ्नमा चाँहीं सिपालु रहेछ। पत्रिकाको समाचार फरर पढेर सुनाउछ। गीत पनि राम्रो गाउँछ। रक्सी नखाएको बेलामा आफ्नो ब्यथा कसैलाई सुनाउदैन। हुन पनि यस्तै हुनुपर्छ, दुनियाँलाई दु:ख सुनायो, अगाडि कठै भन्छन पछाडि खुच्चिङ भन्छन। जसलाई सुनाए पनि आफ्नो दु:ख सधैं आँफैसँग हुन्छ। अर्काको कठैले पेट भरिदैन, घरमा चुलो बल्दैन, त्यो भएपछी के काम हामीलाई त्यस्ता जाबा कठै?
हरे यो पछाडि भएको जिपले पनि कति हर्न बजाएको हो? ठाऊँ पाएपछी त साइड दिईहाल्थेँ नि, जस्ता घुम्तिमा नि ओभरटेक गर्नु पर्ने यिनलाई। यस्तैले गर्दा आफु पनि त्रिशुलिमा खस्छन अरुलाई नि खसाल्छन। यस्तो बर्खाको समयमा बाटो चिप्लो हुन्छ, भने बेलामा ब्रेक लाउँदैन, अलि बिस्तारै चलाऊनु नि। ज्यान भन्दा पनि ठुलो के कामको हतार होला? ......ल ल जा तेरिमासाले......... धत्तेरी............. पुलिस पो रैछन्...... पुलिसै त हैनन क्यारे, अर्कै झन्डा छ........ तर बन्दुक पनि लिएका छन............. ओहो........ यी त अर्कै परे जस्तो छ........... ए ........... बल्ल चिनें........ फेरी पछाडिबाट हर्न बझ्दैछ....... होइन यिनका गाडी कति छन हाउ?
खोइ अब त जहाँ भए नि साइड दिनु पर्‍यो। लौ जाउ सरकार........ हाहाहा.... धोतीका जिप भनेर बाल नदिएको त यहाँ अर्कै पो परेछन, साइड नदेको भनेर खोरमा लगेर जाक्ने पो हुन कि? साइड दीइहालेँ अब छिटो कटे हूने नि.......... ओहो उताबाट ट्रक आइसक्यो छिटो कटे हूने बरु............ लौ लौ लौ लौ... आइ पो सक्यो त, मै रोक्छु भो....... जाओस तेस्किमा**।
हरे यो ब्रेक, लौन लौन गाडी त दाइने तीर बाङगि पो हाल्यो। त्यो जिपको मु** ग्वाँजे ड्राइभरले यता गाडी बाङगिएको देखेसी त ब्रेक हाने हुनी नि ................... लौ लौ लौ, छोयो छोयो छोयो ........... धन्न तीन वटै रोकिए......................................... जिपको देब्रे साइड धस्सी हाल्यो। बेलैमा तीन वटै गाडी रोकिएर मान्छे चाँहीं कसैलाई केही भएन जस्तो छ। म भागौँ कि के गरौं त अब? ओहो म त केही सोच्नै सकिन। को रहेछ र हो यो गाडीमा?......................... ए..... यी पो रहेछन... सधैं टिभी र पत्रीकामा देखिने चाँहीं..... लौ यीनलाई देखेपछी मेरा हातगोडा लुला भएर आए। कस्तो दशा रहेछ नि आज..... कस्ता कस्तालाई त छाडेनन् यिनले मलाई झन् के छोड्लान र खै? लौ आजै मेरो अन्तिम दिन रहेछ........................... सबैले मलाई घेरा हाले........................ पुलिस पनि आए, आर्का पनि आए। पुलिस पनि छन् भनेपछी यो बिच बाटोमा ज्यानै चाँहीं नलेलान। त्यही पनि यी गाडीमा भएका चाँहीं सबभन्दा धेरै पढेका हुन क्यारे।
'ब्रेक दाँयाँ तान्थ्यो एमेर्जेन्सी ब्रेक लाऊँदा' मेरो खलाँसीले कसैले नसोध्दै भन्यो
'के दाँयाँ तान्ने, साले ब्रेकै नभएको गाडी लिएर हाइवेमा हिड्छस?.
'ब्रेक नभएको भए कसरी रोकियो त? पानी परेको भएर दाँयाँ तानेको हो सर, गुरुजीको केही गल्ती छैन'
ओहो अचम्म, यो केटो त बोल्न पनि सिपालु रहेछ। डुब्दै गरेको मान्छेले परालको तान्द्रो भेटे पनि समाउछ रे भन्ने सुनेको थिएँ। मलाई अहिले त्यस्तै लागेर आयो, खलाँसी बोलिदिनाले धेरै आड भरोशा पाए जस्तो भयो। नत्र म गरीब को पक्ष लिएर को बोल्ने त्यहाँ अरु? मलाई एकै पटक भए नि गाडी भीत्र हुनुभएका सँग माफ माग्न मन लाग्यो, ज्यान बक्स माग्न मन लाग्यो। तर उनी त मतिर हेर्दा पनि नहेरी अर्को गाडीमा चढेर गए।
मेरो गाडी त्यहि छेउ लाग्यो, पुलिसले सबै प्यासेन्जरलाई अर्को बसमा हालेर पठाए रे। खलाँसी गाडी कुर्दै बस्यो। म चाँहीं थानामा पुगें। यहाँ कोही मलाई 'को होस्?' भनेर सोध्छन, कोही 'कसले पठाएको', 'कसले अह्र्याएको' भनेर सोध्छन, 'नाम भन' भन्छन। म सोझो ड्राइभर.....को हूँ भनुँ? कसले पठाएको हुनु मलाई, घरको चिसो चुलोले पठाएको..... आफ्नै पेटले अह्राएको.... तर कसले बुझ्ने यहाँ मेरो ब्यथा। कताबाट हो छानबिन समितीका मान्छे आउने रे भन्दै थिए।
तीनले फेरी के सोध्ने होलान खै? त्यही को होस्, नाम भन भन्ने त होलान। कसको नाम लिउँ अब म? कठै मेरी बुढी, पोइले आज सारी ब्लाउज ल्याइदेला भनेर कत्रो आश गरेर कुरी बसेकी छे होली, साहु यतिबेला सम्म गाडी किन आएन भन्दै बाटो हेर्दै होलान, के गर्छेस बुढी, ल्याउन त खोजेकै हूँ, साहुजि तपाईंलाई पनि मलाई पनि राम्रै होस् भनेर राम्रै गर्न खोजेकै हूँ, तर के गर्नु? मेरो अभागि पुर्पुरोमा सधैं दु:ख पाउन लेखेको रहेछ।
किर्किर किर्किर जुनकिरी कराऊँदै छन बाहिर, लाम्खुट्टे बिछिट्टै छन भीत्र। त्यतिकैमा खलाँसी निन्याउरो मुख लिएर आयो, मलाई खाना लिएर आएको बेला पारेर गाडीको छतमा भएको जम्मै लगेज चोरेर लगेछन् असत्तिहरुले। हरे मेरो भाग्य....!!
1st: मेरो आत्मकथा [Story] Part-1
2nd: मेरो आत्मकथा [Story] Part-2
3rd: मेरो आत्मकथा [Story] Part-3
Thapa Damber August 1, 2012 at 11:59 AM
yo mero katha ko part5kahile ho aaune aba yo katha ekdamai man pareko thiyo k garne hora.
Bhimsen Dura August 1, 2012 at 11:59 AM
दाईभरनीले २ हजार कै भए नी सारी ब्लाउज लगाएको पढ्ने मन थियो तर अन्तमा कथाले यो मोड लिदा मन अमिलो भयो |
तारा मगर पाल्पाली August 1, 2012 at 11:59 AM
मजाको लाग्दै थियो, जेल मै गैर इन्द गर्नु भो ..............अरु भाग पनि छिटै लेख्ननुस .......निशंक जी